Fa maninona no tsy amidy amin'ny Amazon.com ny MediaLight? - Jiro MediaLight Bias Lighting
Fa maninona no tsy amidy amin'ny Amazon.com ny MediaLight?
Tsy mandray fanapahan-kevitra mora foana izahay, toy ny tsy manisy lisitra mora foana ny vokatray. Na izany aza, Amazon dia nanoro ny kojakoja tsy mifanaraka izay mety manimba ny jiron'ny fitongilananay ary mamela ny lisitry anay ho voaroban'ny mpivarotra vokatra hafa.
Jereo fa ny hevitra momba ity vokatra ity dia ho an'ny MediaLight Quad, ny maodelin'ny MediaLight teo aloha. Mpivarotra iray hafa no nanao an-keriny ny lisitray ary tsy afaka namerina izany izahay. Rehefa nitranga izany dia namindra ny fivarotana ny Quad ho amin'ity tranonkala ity izahay.
Mihevitra ianao fa afaka nividy MediaLight tena izy tany Amazon. Raha nampifandray ny famatsiana herinaratra 12v natolotry ny Amazon (etsy ambany) amin'ny LX1 na MediaLight ianao dia nanimba ny jiro bias avy hatrany satria mandeha amin'ny herin'ny USB ny jirony ary ny LX1 sy ny MediaLight dia nomena isa 5v.
Ohatra 2: Tolo-kevitra tsy mifanaraka
Mazava ho azy fa nandrakotra izany izahay fahavoazana avy amin'ny tolo-kevitr'i Amazon tsy marina eo ambanin'ny Warranty MediaLight, saingy olana lehibe io. Niezaka niara-niasa tamin'ny fanohanan'ny mpivarotra izahay mba hanesorana ireo tolo-kevitra tena tsy mitombina, saingy tsy nahomby.
Nisy olana lehibe hafa koa, fa ireo no nanimba indrindra.
Ireo no karazana olana manaitra ny mpitantana amin'ny alina, ka nitondra ny varotra sy ny fahafaham-po tao an-trano izahay. Ireo vokatra sy kojakoja rehetra ato amin'ity tranonkala ity dia azo antoka fa hiara-miasa amin'ny hazavanao tsy mitongilana ary alefa isan'andro avy amin'ny trano fanatobiana entana any NJ. Ny lisitray rehetra dia marina ary hahazo izay nandidianao ianao. Ary ny tranonkalantsika dia ahitana fampahalalana mahasoa be dia be momba ny hazavana MediaLight, LX1 ary fitongilanana amin'ny ankapobeny, tsy nisy na iray aza azonay nampidirina tao amin'ny Amazon.
Ny lisitra sy ny tolo-kevitra dia miovaova arakaraka ny firenena. Raha mahita an iraisam-pirenena mpivarotra amidy eo amin'ny tsenan'ny Amazon iraisam-pirenena ary te hanamarina fa nahazo alalana izy ireo, afaka mifandray aminay ianao.
Next lahatsoratra Ahoana no fomba hametrahako jiro mitongilana mba hahafahako mamindra azy ireo amin'ny fahitalavitra hafa (na manala azy mora foana amin'ny ho avy)?